iPhone for Sale: Sida loo iibi aad u isticmaala iPhone qiimo wanaagsan a
iPhone for Sale: Waa in-Do Ka hor inta Iibinta Your Old iPhone
Waxaa jiri kara sababo kala duwan si ay u iibiso iPhone. Waxaa laga yaabaa in aad dooneyso in la gaarsiiyo iPhone 4 ilaa iPhone 5S; waxa uu jebiyey oo aadan rabin in lagu dhiso; receieved kaliya hal cusub ee dhalashada; ama aad rabto in aad bedesho phone Andorid ah sida Samsung Galaxy S5. No arrinta sababta aad u dooneyso in ay iibiso aad loo isticmaalo iPhone, waa in aad rabto in aad hesho qiimo wanaagsan. Ka hor inta aadan u iibin, weli waxaa jira wax kale oo aad u baahan tahay inaad bixiso si ay dareenka.
Sida qalab maalin kasta isgaarsiinta, iPhone ah xambaarsan badan oo xogta shakhsiga shaqo ama nolosha. Waxaad u baahan tahay gurmad aad iPhone ka hor inta aanad ka iibinaynin. Si gurmad aad iPhone, ayaa waxaa jira siyaabo kala duwan oo kulan dalabaadka kala duwan.
1) Haddii aad sii jiri user iPhone ah, habka ugu fiican ee aad gurmad iPhone waa in la isticmaalo Lugood ama iCloud. Waxaad sameyn kartaa in gurmad aad iPhone la mid click via Lugood ama iCloud. Markaas si fudud u soo celin kartaa si aad iPhone cusub.
2) Ma doonaysaa in la isticmaalo taleefanka ku salaysan nidaam kale sida Android? Markaas aadan u malaynayeen in ay gurmad aad iPhone la Lugood ama iCloud, maxaa yeelay, ma aad isticmaali kartaa file gurmad mustaqbalka si kasta, xitaa wuu akhriyey. Waxaad si fiican u isticmaali lahaa qalab dhinac saddexaad si aad u hesho iPhone xoojiyaa on your computer, si aad iyaga dajiyaan karaa in aad telefoon cusub.
Ama waxaad kaliya ku wareejin kartaa dhammaan xogta laga jir iPhone in ay telefoonka aad cusub ka hor iibinta. My talo waa mid ka mid labaad. Waxaa inta badan ka sahlan. Ha welwelin ku saabsan qalabka. Waxaad isticmaali kartaa MobileTrans , taas oo kuu oggolaanaysa in aad xogta ka mid ah iPhone, telefoonada Android iyo telefoonada Symbian wareejiyo. Waxaa aad u caqli badan.
Waxaad halkan ka heli kartaa: Download version raad for free.
Waa in uu jiraa xog quruxsan shakhsiyeed sida messaegs, xiriirada, sawiro, accouts bangiga iyo ka badan oo sidan oo kale aad iPhone, waayo, aad u isticmaalo waqti dheer ah. Sidaa darteed, ma si toos ah iibiso iPhone aan shaqada tirtirka ah samaynayaan. Waxaad waa. Tani waa sida ugu badan ee muhiim ah sida taageero ilaa xogta aad, ama aad lumiso doonaa gaarka ah. Waxa kale oo jira laba siyaabood oo loo masixi dhammaan macluumaadka aad loo isticmaalo iPhone.
1) Dib u celi aad iPhone in goobaha warshad: Dad badan ayaa dooran sidan inaan tirtiro dhammaan xogta ku iPhone marka ay u baahan tahay inay tan sameeyaan. Waa wax iska fudud: tagaan si ay Settings> General> celi> masixi All Content iyo Settings. Markaasay aad iPhone noqon doonaa mid cusub.
2) Tan waxaa jira barnaamijyo badan oo soo kabashada xog ku saabsan suuqa, waxaa laga yaabaa inaad ka welwelsan tahay in dad kale ay soo kaban karto xogta aad ka iPhone. Wax macno ah ma. Waxaad dooran kartaa inaad isticmaasho xirfadle tirtire xogta iPhone si aad u hesho iPhone dib ugu cusub.
Waxaad u Baahan Tahay Inaad Ogaato Kahor inta Gadashada loo isticmaalo iPhone
> Resource > iPhone > Waa-Do Ka hor inta Iibinta Your Old iPhone